झापा गोल्डकप : कसले चुम्ला ट्रफी ?(भिडियो हेर्नुहोस्) « epurwa
झापा गोल्डकप : कसले चुम्ला ट्रफी ?(भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रकाशित मिति : २७ फाल्गुन २०७४, आईतवार १२:२४
झापा, फागुन २७ । तेस्रो झापा गोल्डकपको उपाधीका लागि सोमबार आयोजक झापा ११ र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । झापा गोल्डकपको निरन्तर तेस्रो पटक फाइनलमा पुगेको रमपम झापा ११ र पहिलो संस्करणको उपाधी विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब दुवैले यसबर्षको उपाधि चुम्ने दावी गरेका छन् ।
आइतबार पोष्ट म्याच कन्फ्रेन्समा बोल्दै झापा ११ का प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले खेलाडीको कडा मेहेनत र दर्शकको समर्थन खेल जित्ने आधार भएको बताएका छन् । उनले आर्मी सशक्त टीम भएपनि झापा टेक्निकल गेममा उत्कृष्ट भएकाले उसलाई हराएर उपाधि हात पार्न सकिने बताए । प्रशिक्षक कटुवालले ओभर एजका कारण स्ट्राइकिङ लाइनमा केही समस्या रहेको बताउँदै त्यसलाई पुर्ती गर्न विश्वास श्रेष्ठलाई यसैबर्षदेखि अनुबन्धन गरेकाले खेल जित्ने दाबी गरेका छन् ।
झापा ११ का टीम क्याप्टेन योगेश गुरुङले आयोजकको अनुबन्धनका कारण झापाली खेलाडीमा हौसला बढेकाले प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बताए । उनले उपाधि जितेर झापाली दर्शकको चाहना पुरा गर्ने दावी गरे । आर्मीका प्रशिक्षक चुनबहादुर थापाले खेलाडीको अनुभवलाई उपयोग गरेर खेल आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति लिएको बताएका छन् । आर्मीको टीममा झापाको भन्दा धेरै जना राष्ट्रिय टीममा सहभागि खेलाडी रहेका छन् । झापाको टीम सशक्त रहेको भएपनि यो सिजनको सातौं उपाधि कब्जा गर्ने दावी समेत थापाले गरेका छन् । आर्मीले यसबर्ष देशका बिभिन्न स्थानमा भएका गोल्डकपमध्ये ६ वटा गोल्डकपको उपाधि जितेको छ ।
आर्मीका क्याप्टेन भरत खवासले झापामा आएर खेल्दा हौसला मिलेको बताए । उनले यो बर्ष अतिरिक्त समय थपिनुपर्ने बताए । निर्धारित ९० मिनेको खेलमा बराबरी भए सिधै टाइब्रेकरमा लगिने गरेको छ । उनले समय थप गरेर खेलाउन आग्रह पनि गरे ।
झापाले सुदुरपश्चिम ११, सिक्किम युनाइटेड र थ्री स्टार क्लबलाई हराएर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो भने आर्मीले बिभागीय टीम नेपाल पुलीस र मनाङ मस्र्याङदी क्लबलाई हराउँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।